Ngezinye 192-168-1-1 Ikheli le-IP Info, afinyeleleka http://192-168-1-1l.com, omunye eziza kuqala wethu oyinhloko uwukwenza ubumfihlo izivakashi zethu. Lo mbhalo Yemfihlo Inqubomgomo iqukethe izinhlobo ulwazi oluqoqwe futhi irekhodwe ngalokuhlelekile 192-168-1-1 Ikheli le-IP Info kanye nendlela esisebenzisa ngayo-ke.
Uma unemibuzo eyengeziwe noma zidinga ulwazi oluthe xaxa mayelana nokuthi Inqubomgomo Yemfihlo yethu, unganqikazi ukuthintana nathi nge-imeyili ku-jaypol929@gmail.com
192-168-1-1 Ikheli le-IP Info kulandela inqubo ejwayelekile kokusebenzisa kumafayela wokungena. La mafayela ungene izivakashi lapho uvakashela amawebhusayithi. Zonke izinkampani ibamba ukwenza lokhu futhi ingxenye amasevisi ibamba’ analytics. Ulwazi oluqoqwe by kumafayela okungena zihlanganisa internet protocol (IP) amakheli, uhlobo lwesiphequluli, Umhlinzeki Wesevisi Ye-inthanethi (i-ISP), usuku kanye nesikhathi isitembu, ebhekisela / ephumayo Amakhasi, futhi mhlawumbe inani ukuchofoza. Lezi azixhunyiwe kunoma yiluphi ulwazi okungukuthi okhonjwa. Injongo ulwazi ngoba ukuhlaziya Amathrendi, esasikhipha isayithi, abasebenzisi ethungatha’ ukunyakaza kuwebhusayithi, futhi ubutha nolwazi lokubala ubuningi babantu.
Ama-cookie kanye Web Beacons
Njenganoma iyiphi enye iwebhusayithi, 192-168-1-1 Ikheli le-IP Info isebenzisa 'Amakhekhe'. Lawo makhukhi asetshenziselwa ukugcina ulwazi kuhlanganise izivakashi’ izintandokazi, kanye namakhasi kuwebhusayithi ukuthi isivakashi afinyelelwe noma wavakashela. Ulwazi isetshenziswa nokwandisa abasebenzisi’ nakho ngokwenza okuqukethwe ikhasi lewebhu kwethu okusekelwe eBhayibhelini ngokuphathelene izivakashi’ uhlobo lwesiphequluli kanye / noma eminye imininingwane.
-Google DoubleClick DART-Cookie
Qaphela ukuthi 192-168-1-1 Ikheli le-IP Info ayinakho ukufinyelela noma ukulawula la makhukhi ezisetshenziswa abakhangisi third-party.
Okwesithathu Izinqubomgomo Inqubomgomo Pary
192-168-1-1 Ikheli le-IP Info Inqubomgomo yemfihlo asisebenzi kwabanye abakhangisi noma amawebhusayithi. Ngakho, sisuke wazisa ukuthi uthintane abafanele Inqubomgomo Izinqubomgomo zale ziphakeli third-party isikhangiso ngolwazi olunemininingwane. Lungase luhlanganise imikhuba yabo kanye nemiyalelo mayelana nendlela ukuphuma ongakhetha ezithile. Ungase uthole uhlu oluphelele lezi zinqubomgomo Inqubomgomo nezixhumanisi zabo lapha: Inqubomgomo yemfihlo Links.
Ungakhetha ukuvimbela amakhukhi ngokusebenzisa izinketho zakho isiphequluli ngabanye. Ukuze ukwazi ulwazi oluthe xaxa mayelana nokuphathwa khukhi iziphequluli zewebhu ethize, lingatholakala at iziphequluli’ amawebhusayithi abafanele. Yiziphi Amakhukhi?
Enye ingxenye ekuphileni kwethu ingeza Ukuvikelwa izingane ngenkathi usebenzisa internet. Sikhuthaza abazali nabanakekeli ukuba bagcine, iqhaza, kanye / noma zigade futhi liqondise umsebenzi wabo inthanethi.
192-168-1-1 Ikheli le-IP Info akusho ngamabomu iqoqe Siqu okukwazi ukubona Ulwazi olusuka izingane ezingaphansi kweminyaka engu- 13. Uma ucabanga ukuthi ingane yakho enikeziwe lolu hlobo ulwazi kwi website yethu, siyakukhuthaza kakhulu ukuba uxhumane nathi ngokushesha futhi sizokwenza imizamo yethu emihle kakhulu sisusa ulwazi olufana kusuka amarekhodi ethu.
Emgomeni Wobumfihlo usebenza kuphela imisebenzi yethu inthanethi futhi isebenza izivakashi kuwebhusayithi yethu mayelana ulwazi ukuthi wabelane kanye / noma ukuqoqa e 192-168-1-1 Ikheli le-IP Info. Le nqubomgomo ayisebenzi kunoma yiluphi ulwazi oluqoqwe ngaphandle kwe-intanethi noma nge iziteshi ngaphandle kule webhusayithi.
Ngokusebenzisa website yethu, wena ngalokhu uvumela wethu Wobumfihlo kanye uyavumelana nemigomo nemibandela.